Netizen Report: Miaraka Amin’ny Fanakatonana Ny Aterineton’i Gabon, Miatrika Fanambin’ny Fihodidinana Sivana Indray Ireo Mpikatroka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Septambra 2016 15:45 GMT
Olon-tsotra mifamory ao Libreville, Gabon, ny 28 Aogositra 2016, mba hanao hetsika talohan'ny namoahana ireo valiny. Sary avy tamin'i Peter Penar (@PPenar) tamin'ny Twitter.
Manolotra ny topimaso erantany amin'ireo fanamby, fandresena, ary ireo fironana malaza mipoitra mikasika ireo zon'ny Aterineto manerana ny tany ny Netizen Report an'ny Global Voices Advocacy.
Nibahana ny fidirana mankao amin'ny Aterineto ny governemantan'i Gabon, kelikely foana taorian'ny nanombohan'ireo mpanao hetsi-panoherana nandà ireo voka-pifidianana filoham-pirenena natao vao haingana, izay nahitàna ny Filoha teo aloha, Ali Bongo, ho nitarika tamin'ny elanelam-bato kely dia kely. Olona an-jatony ihany koa no nosamborina nandritra ireo hetsika momba ilay valim-pifidianana, taorian'ireo fiampangàna nataon'ireo antoko mpanohitra hoe nisy hala-bato. Nanaraka ireo tatitra fanakendàna ny korianan'ny Aterineto sy famerana ny fidirana taminy nandritra ny faran'ny herinandro ilay fanakatonana, ary naharitra dimy andro.
Julie Owono, mpandray anjara amin'ny Global Voices ary lehiben'ny Birao Afrikana ao amin'ny Aterineto Tsy Misy Sisintany, nanazava ny 3 Septambra ny hoe inona no voasivana ary ahoana no mbola iampitàn'ny vaovao ihany:
Ny 29 sy ny 30 Aogositra ary ny 1 Septambra no tsikaritra ireo tsy fandehanan'ny Aterineto. Nifampiresaka tamin'ireo fikambanana fiarahamonina sivily izahay, mba hanofana azy ireo amin'ny fampiasàna ireo fitaovana fihodidinana ny sivana amin'ny Aterineto. Miara-miasa amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena izay nametraka torolàlana tsotra hampivoarana ireo fitaovana ireo izahay. Noho izany, mbola mandeha hatrany ny Aterineto. Indrisy, tsy ireo vahoaka Gabone rehetra no afaka mampiasa azy ireo [ireo fitaovana]. Hatreto, ireo mpampiasa manana fahalalàna ara-teknika lalina ihany no afaka mampiasa azy ireo, ary noho izany, izy ireo no hery mpanentana ny vontoaty rehetra mivoaka ao Gabon. Araka izany ankehitriny, ny sasany amin'ireo kaonty ireo no ifaneraseranay.
Ao amin'ny Aterineto ny fiainan'ireo Afrikana Tavaratra mpitoraka bilaogy momba ny resaka ara-politika
Taorian'ny fitokonana tsy nihinan-kanina nandritra ny roa volana, tafiditra tamin'ny tsy fahatsiarovan-tena ilay Alzeriana mpikirakira vaovao sady mpitoraka bilaogy, Mohamed Tamalt, naiditra am-ponja. Ny faraparan'ny volana Jiona i Tamalt no nanomboka ny fitokonany mba hanoherana ny fisamborana azy sy ny fampidiran'ny manampahefana Alzeriana azy am-ponja. Nandany roa taona tany am-ponja izy noho ny filazàna azy ho naniratsira filoham-pirenena tamin'ny tatitra nataony, izay mifantoka amin'ireo resaka kolikoly sy ny anjara asan'ny tafika amin'ny fiainana politika.
Miatrika fanamelohana ho faty ny Maoritaniana iray mpitoraka bilaogy, noho ny nanoratany lahatsoratra tamin'ny blaogy mitsikera ny fampiasàna ny Silamo hanamarinana rafitra fizarazaràna ara-tsaranga. Ny volana Aprily, nohamafisin'ny Fitsaràna Mpandrava Didy ny saziny, taorian'ny famerenana nandinika ny raharaha, fa manantena kosa ireo mpanentana mpiaro ny zon'olombelona fa hamoaka sazy malefaka kokoa ny Fitsaràna Tampony.
Lasa lohatenim-baovao amin'ny raharaha fanalam-baràka amin'ny Facebook i Bhoutan
Voalohany izao no miatrika fiampangana fanalam-baràka noho ny lahatsoratra amin'ny Facebook ny mpanao gazety iray ao Bouthan. Lahatsoratra mikasika adin-tany eo aminà fianakaviana Bouthane sy lehilahy iray mpandraharaha, Ap Sonam Phuntsho, izay lazain'i Phuntsho fa niteraka “fahasimbàna tsy azo amboarina” amin'ny lazany.
Fiarovana ny ankizy sy fanivànana ny Aterineto any Paragoay
Nandany lalàna vaovao vao haingana i Paragoay, lalàna izay hampitandreman'ireo mpiaro ny zo nomerika fa hanivana ny zon'ny fahalalahana miteny an'ny ankamaroan'ireo vahoaka. Natao hiarovana ireo ankizy amin'ny votoaty mety hamotika ao amin'ny Aterineto, hisy rafitra fanivanana ilay “Lalàna momba ny Fiarovana ny Ankizy sy ny Adolantsento amin'ny Vontoaty Manimba ao amin'ny Aterineto”, mba hisorohana ny vontoaty tsy ho afaka hidiran'ireo tsy ampy taona. Mampiasa ny tenifototra #CensuraEnInternetPY, izay midika hoe “Fanivanana Amin'ny Aterineto PY”, ireo mpisera amin'ny Aterineto manohitra ilay lalàna.
Fito herinandro taorian'ny nanjavonany, mbola tsy hita ilay mpanao gazety Borondey
Tsy hita efa maherin'ny fito herinandro ilay Borondey mpanao gazety, Jean Bigirimana, na heverina aza hoe any am-ponjan'ny governemanta izy. Nanoratra tao amin'ny vohikalam-baovao tsy miankina Iwacu i Bigirimana, iray amin'ireo media vitsy tsy mainkina ao anatin'ny tontolon'ny media voaaramaso akaiky ao Borondi. Ankoatr'ireo zavatra hafa maro, nosoratan'i Bigirimana ny momba ny fiainan'ireo Borondey mpanao gazety lasa sesintany, izay mipetraka any Roandà mpifanila vodirindrina, manana fifandraisana henjana miaraka amin'i Borondi. Samy miasa manamafy ny fampahafantarana ny fanjavonany sy miantso ny famotsorana azy ny Iwacu sy ny vadin'i Bigirimana.
Ao amin'ny Aterineto any Iràna: Ny spearphishing (Fanjonoana), ny feiresahana amin'ny Orange ary famborahana ny “Intranet” nasionaly
“Namboraka” ny intranet (Aterineto anatiny) nasionaly i Iràna, tetikasa izay nahatonga tahotra hoe vao mainka hahazo vàhana kokoa manerana ilay sehatra tena voaaramaso be ny governemanta, ato ho ato. Efa ampahan'ny fotodrafitrasan'ny seraseran'i Iràna hatramin'ny taona 2006 ny famitàna ny “Tambajotran'ny Loharanom-baovao Nasionaly”, noho izany, tsy voatery ho zava-baovao loatra ilay zavatra naboraka. Nanazava tao amin'ny Global Voices ilay teknolojista Iraniana Mehdi Yahyanejad, fa manana hafainganam-pandeha haingana lavitra noho ny Aterineto manerantany ao Iràna ilay tambajotra, ary mety ho ampahan'ny tetikady entina handrisihana bebe kokoa ny Iraniana hampiantrano ireo vohikalany ao amin'ilay tambajotra nasionaly ihany koa io. Hoy izy:
Amin'ny ankapobeny, toa drafitra natao handrisihana ireo vohikala Iraniana mba hamindra ny fampiantranoany ny vohikalany ho ao Iràna ilay izy, amin'ny fametrahana vidinà “bande passante” manavakavaka, ho an'ireo ao an-toerana manoloana ireo fifandraisana Aterineto iraisam-pirenena. Hanamora hanakatonan’ny governemanta Iraniana ny Aterineto, raha ilaina izany, ny fampiantranoana ny ankamaroan'ireo vohikala tahaka izany ho ao anatin'ny firenena.
Hitan'ireo mpikaroka amin'ny fiarovana, Claudio Guarnieri sy Collin Anderson, fa misy hetsika nikendrena hanohintohinana ireo fitaovana fiseraseran’ ireo Iraniana mampiasa tekinika fantatra amin'ny hoe “spearphishing” ary ireo fitaovana fidirana avy eny lavitra, izay hanome fahafahana ireo mpanafika hiditra ao ka hampiasa ny solosaina na findain'ny olona iray avy eny lavitra. Ny iray amin'ireo teknika dia ahitàna mpifaninana iray mipetraka ho fikambanana miaro ny zon'olombelona (toy ny Fiombonana ho an'i Iràna) na sampandraharahan'ny fifindramonin'i Etazonia, ary fandefasana hafatra mailaka misy viriosy ao anatiny. Fanafihana iray hafa no nanohintohina kaonty maherin'ny am-polony tao amin'ilay tolotra hafatra ampiasain'ny olona maneran-tany, Telegram, ary namantatra ny nomeraon'ireo Iraniana mpampiasa miisa 15 tapitrisa, ny tataka lehibe indrindra fantatra tamin'ilay tolotra fandefasana hafatra.
Mety hividy anjara amin'ireo hetsika finday any Iràna, ato ho ato, ilay orinasa fifandraisandavitra Frantsay Orange. Nilaza ny Wall Street Journal fa mety ho orinasa tandrefana voalohany hanao izany io hatramin'ny nanesorana ireo sazy, na dia tokony ho marihana aza hoe nisy fotoana ny MTN ao Afrika Atsimo no tompon'ny 49%-n'ny fandraharahàna finday fahatelo lehibe indrindra ao Iràna, MTN Irancell. Mbola kely ihany ny resaka fanta-bahoaka eo amin'ny fifanarahan'ny Orange sy ny Orinasa Fifandraisandavitra ao Iràna, izay ireo Mpiambina ny Revolisiôna no tomponny amin'ny ampahany, sampana tomponandraikitra amin'ny fiambenana sy fampidirana am-ponja ireo mpikatroka mafana fo maro, mpanao gazety, ary ireo gadra politika. Notondroin'ny governemanta Amerikana ho fikambanana mpampihorohoro ihany koa ny Orinasa Fifandraisandavitra ao Iràna.
Arahan'ny manampahefana Amerikana misahana ny varotra ny WhatsApp, noho ny fomba fanaony mizara angon-drakitra
Nameno fitoriana an'ireo drafitry ny Facebook hanangona ireo laharanà finday avy amin'ireo tolotra WhatsApp fandefasany hafatra ny Kaomisiona Federaly misahana ny ao Etazonia (FTC). Ilay fitoriana dia miampanga ny Facebook ho miditra amin'ny “hetsika sy fomba fanao tsy ara-drariny na mamitaka” — Nanome toky ireo mpampiasa azy ny WhatsApp fa tsy hanome ny angon-drakitry ny mpampiasa azy ho an'ny Facebook rehefa azo tamin'ny alalan'ny tambajotra sosialy io, miaraka amin'ny mpanorina ny WhatsApp, Jan Koum, manome toky ireo mpampiasa fa “voafatotra ao anaty kaody anatin'ny ADN-nay ny fiainana manokana.” Raha mbola mitohy ny fanadihadian'ny FTC, manana hatramin'ny 25 Septambra ireo mpampiasa raha hisafidy ny fifanarahana fizaràna angon-drakitra na tsia. Afaka hita ato ny torolàlana isan'ambaratonga amin'ny fanaovana izany.
Amin'ireo lalàna vaovao mikasika ny zon'ny mpanoratra napetraky ny Vondrona Eorôpeana, handray vola ve ireo mpamoaka vaovao?
Eo ambanin'ilay sosokevitra fanovàna vaovao amin'ny lalànan'ny zon'ny mpanoratry ny Vondrona Eorôpeana, mety ho laniana ato ho ato ireo lalàna nasionaly mitaky ireo mpamoaka vaovao hangataka vola avy amin'ireo mpanangona sahala amin'ny Google News amin'ny fampisehoan'izy ireo ny ampahan'ny lahatsoratra eo amin'ny vohikalany. Efa nandany lalàna toy izany i Espaina, nitondra ny Google hanakatona ny tolotra fanomezam-baovaony ao amin'ilay firenena. Ny volana Septambra, hametraka ny tolodalànany ny Kaomisiona Eorôpeana mba hanavaozana ireo lalànan'ny zon'ny mpanoratra. Miantso ilay volavolan-dalàna niporitsaka ho“ACTA hafa indray” ilay mpikambana ao amin'ny Parliemanta Eorôpeana, Julia Reda, mitsikera ilay tolotra fanovàna ho mametraka ireo tombotsoan'ny orinasa goavana alohan'ny an'ireo mpamorona, mpandraharaha ary mpampiasa.
Jereo ireo torolàlana vaovao tsy misy fitanilàna ao amin'ny aterineto ao amin'ny Vondrona Eorôpeana
Namoaka ireo toro-làlana nasiam-panovana izay mametraka ny tsy fitanilàna ao amin'y anterineto ao amin'ny Vondrona Eorôpeana, ihany nony farany ny Sampana Eorôpeana Mpandrindra ny Serasera Elektronika, tamin'ny famintinana ny zotranà asa nandritra ny telo taona mikasika ny politikam-panavaozana hisorohana ny fomba fanao manavakavaka amin'ny seraseran'ny Aterineto.
Torolàlana amin'ny Fiarovana ny Fiainana Manokana sy Fikarohana Mahatsapa tena – Andrew Case (amin'ny teny Anglisy)
Misorata hahazo ny Netizen Report amin'ny mailaka
Nitondra ny anjara birikiny tamin'ity tatitra ity i Mahsa Alimardani, Ellery Roberts Biddle, Laura Vidal ary Sarah Myers West.